Iivenkile ezinkulu 7-elinanye kwi US baza ukunika iimveliso CBD phambi kokuphela kwalo nyaka.
Kwaye ukuze kakuhle kubizwa idabi esiqhelekileyo ukuba cannabidiol, because the chain is the world’s largest in terms of number of stores – 7-Eleven has more branches than McDonald’s!
Ungaba thelekisa 7-Eleven kunye Albert Heijn kunye Jumbo kunye, so large and influential is the chain of ‘convenience stores’ in the US.
Uninzi igcina kwakhona evulekile 24/7 kwaye ngaphandle emzini America, they are 17 kwamanye amazwe, kubandakanya Japan, Mekhsikho, Australia ne China.
Ekuqaleni kuka January, chain waba elipheleleyo 64,319 amasebe, ngoko ke ngokukhuselekileyo kubizwa idabi enkulu ukuba i-7-elinanye uya kuqalisa kwakhona ukuthengisa iimveliso CBD kulo nyaka.
It is specifically the CBD products of Phoenix Sikhala , a company that is based in – how could it be otherwise – Colorado.
Phoenix iinyembezi igqalwa zenkampani eziphambili kurhwebo CBD kwaye ukusukela 2010 liye ukuphanda lemveliso iimveliso cannabidiol
Ngeli xesha, ezithile 140 (!) iifomyula ezahlukeneyo sele kwambatha kwimarike.
Kwenzeka, zonke iimveliso zabo zenziwe benemfuyo hayi evela kwentsangu CBD-rich.
Ngeli xesha, uqengqeleko ngaphandle iimveliso zabo CBD kwi-7-Elevens ikakhulu iya kugxininisa United of Nevada, Colorado, Massachusetts, Illinois, Maryland, Washington, DC, Florida kunye California, according to ukukhululwa press that announced the deal on Tuesday.
Yaye oko kuthetha ukuba abathengi baya kuba nako ukuthenga CBD ubuncinane 4,500 7-Elinanye igcina phambi kokuphela 2018, inani oluya kuphakama ukuba ngaphezu 7,000 Iimarike lula phakathi kweminyaka emithathu.
'CBD yi nu mainstream'
“We are excited that 7-Eleven brings the Phoenix Tears product line to millions of Americans, ngubani na azuze kule ecocekileyo-hlobo, iimveliso zempilo iphephile nezingqinekayo,” says founder Janet Rosendahl-Sweeney of the CBD brand.
'Ukongeza koko; this agreement confirms our belief that the status of CBD as a mainstream wellness option is there.
Thina silangazelela ukungena kwixesha ezintsha ngempumelelo, Izithako epheleleyo kunye hemp-based ezifumaneka lula kwiivenkile lula wendawo ngoku. “
Ngokutsho Forbes imagazini ishishini, imarike CBD ujonge phambili amaxesha zegolide: yi 2020 liye landa nge kungekho ngaphantsi kwe 700 ekhulwini!
iimveliso CBD ngoku amawaka ezishishina 7-Eleven ekhoyo